फिल्म क्षेत्र थला पर्दा कलाकार झगडामा व्यस्त Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
यतिखेर नेपाली चलचित्र क्षेत्र थला परेको छ। यसलाई चलायमान बनाउन चलचित्रसँग सम्बिन्धित सबै संघसंस्था मरिमेटेर लागिपरेका छन्। निर्माता संघ, प्राविधिक संघ, द्वन्द्व निर्देशक संघ, चलचित्र संघ, चलचित्र वितरक समाज, निर्देशक समाज, आदिवासी जनजाति चलचित्र संघ लगायतका झन्डै १२ संघसंस्थाले सरकारलाई गुहारिरहेका छन्।
कलाकारलाई धेरैले पछ्याउँछन्। उनीहरुले कुरा राखे सरकारले छिटो सुन्ला भन्ने आशा चलचित्रसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थालाई छ। तर कलाकार मौन छन्। केही को महानायक भन्ने विवादमै ब्यस्त छन्। कोही सानातिना म्युजिक भिडियो र टिकटकमै रमाइरहेका छन्।
‘यतिबेला फिल्म क्षेत्र अफ्ठ्यारोमा छ। कलाकारले आवाज उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर उनीहरु वास्ता गर्दैनन्,' चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका निर्देशक दयाराम दाहालको गुनासो छ' विभिन्न डेलिगेसनमा हात जोडेर आइदिनुपर्‍यो भन्दा पनि उहाँहरु आउनुहुन्न।'
दाहालका अनुसार झन्डै २० महिनाको प्रसव पीडापछि नेपालका हल खुलेका छन्। कोभिड-१९ ले गर्दा सिने क्षेत्रले २० महिना सास्ती त झेल्यो तर हात लाग्यो शून्य। सलोन बस्नेतको ‘डाँडाको बर पिपल’ र सविन श्रेष्ठको ‘धन्दागिरी’ लाई दर्शकले वास्ता गरेनन्। हलमा सिनेमा दर्शकबिनै चल्न बाध्य भयो।
'धन्दागिरी' फिल्मको नाम समेत सुनिएन। तर फिल्म ‘डाँडाको बर पिपल’ ले भने हलमा लाग्नुअघि चर्चा खुबै बटुलेको थियो। कारण थियो, महानायक पदवी।
फिल्म प्रचारप्रसारका लागि तयार पारेको म्युजिक भिडियो प्रदर्शन कार्यक्रममा नायकद्वय शिव श्रेष्ठ र भुवन केसीले एकअर्कालाई महानायकको पदवी हस्तान्तण गरे। पहिल्यै महानायकको पदवी ओगटेर बसेका नायक राजेश हमालका फ्यानहरुलाई त्यो कुरा मन परेन। जसले गर्दा केही दिनका लागि फिल्मको नाम चर्चामा रह्यो।
यहाँसम्म कि यो फिल्मले नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै डिसलाइक पाउने भिडियोको रुपमा इतिहास रच्न सफल भयो। हालसम्म ९० हजारभन्दा धेरै डिसलाइक यो भिडियोले पाइसकेको छ। यसअघि धेरै डिसलाइक पाएको मनोज गजुरेलकी पूर्वपत्नी मीना ढकालको गीतलाई 'डाँडाको बर पिपल'को म्युजिक भिडियोले धेरै पछाडि छाडेको छ।
एक सोमा एक जना मात्रै दर्शक पाउने फिल्मको सूचीमा पनि 'डाँडाको बर पिपल' अटाउन सफल भएको छ। 'धन्दागिरी'ले भने हलहरुमा पोस्टर मात्रै झुण्ड्याउने मौका पायो। यसरी फिल्म फ्लप हुँदा कलाकारलाई खासै घाटा लागेन। मर्कामा परे हलवाला र निर्माता मात्रै।
पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने भएकाले उनीहरु अफ्ठ्यारो स्थितिमा पनि चुपचाप भएको अनुमान गर्छन्, चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान। कलाकार चुपचाप बसेको मन नपरेको भन्दै उनले भने, ‘फिल्ममा हरेकले आ–आफ्ना समूह खोलेर बसेका छन्, अफ्ठ्यारो समयमा मिलेर अगाडि बढ्नेभन्दा झगडा खेल्ने काम मात्रै भएको छ।’
दशैंको फूलपातीमा लागेका दुवै फिल्म पूर्ण रुपमा असफल भए पनि अचम्मित छैनन् प्रधान। जबसम्म गतिलो कन्टेन्ट भएको फिल्म लाग्दैन तबसम्म दर्शक हलमा नआउनेमा उनी ढुक्क छन्।
प्रधानले ५० प्रतिशत अकुपेन्सीसहित हल खोल्ने सरकारको निर्देशनलाई यंग्य गर्दै भने, ‘सपिङ मल, गाडीहरु खचाखच छन्। फिल्म हलमा पनि त्यस्तै हुलमुल भए सरकारले बन्द गर्छ भनेर दर्शक नआएका हुन्।’
दशैंको मौका छोपेर लामो समयदेखि बन्द भएका हलहरु खुले पनि कुनै परिवर्तन भने छैन। हल खुल्नुअघि नेपाल चलचित्र विकास बोर्डमा चलचित्रसँग सम्बिन्धत सबै निकाय भेला भएर रिस्क मोल्ने, चलचित्रको प्रचारप्रसार लगायतका खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरेको छ। ५० भन्दा धेरै ठूला ब्यानरमा फिल्म प्रर्दशनका लागि तयारी अवस्थामा रहेपछि उनीहरुले फिल्म चलाउने आँट गरेका छैनन्।
सरकारी अनुदानको आश
फिल्म चल्दैछ, हल सुरक्षित छ भनेर जति नै कुर्लिए पनि कन्टेन्टले दिमागको रक्षा गर्न नसक्दा दर्शक हलतिर पाइला सार्दैनन्। जसले गर्दा यतिबेला फिल्म क्षेत्र अत्तालिएको छ। उनीहरु बारम्बार सरकारको अभिभावकत्व खोजिरहेका छन्।
चलचित्र वितरक समाजका महासचिव अशोक शर्माका अनुसार यतिबेला सरकारले सहयोग नगरे फिल्म क्षेत्र उठ्नै सक्दैन। उनले सुरुवाती समयको पनि स्मरण गरे।
सरकारले विसं. २०२२ सालमा नेपालमा पहिलो नेपाली फिल्म ‘आमा’ बनायो। त्यसपछि ‘माइतीघर’ लगायतका फिल्ममा पनि सरकारले नै लगानी ग¥यो। सधैं सरकारले फिल्म बनाएर बस्न सक्दैन, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारी भयो।
विसं. २०२८ सालमा शाही नेपाली चलचित्र संस्थान गठन भयो। यो संस्थानको मुख्य उद्देश्य नै निजी क्षेत्रबाट फिल्ममा लगानी भित्र्याउनु थियो। शाही नेपाली चलचित्र संस्थानले त्यो समयमा फिल्ममा रुचि राख्ने धेरै मानिसलाई फिल्म पढ्नका लागि विदेश पठाउने काम गरेको थियो। जसले गर्दा मानिसहरु फिल्म क्षेत्रका लागि जुर्मुराउन थाले।
लामो समय बित्दा पनि निजी लगानीमा फिल्महरु बन्न सकेनन्। त्यसपछि सरकारले विसं. २०४२ सालतिर मनोरञ्जन करबाट जति पनि पैसा आउँछ त्यसको ६५ प्रतिशत फिल्म बनाउनेका लागि र २० प्रतिशत चलाउनेका लागि दिने नीति बनायो। यही नीतिका कारण फिल्म पूर्ण रुपमा निजीकरण भयो। यतिबेला फिल्ममा सरकारको लगानी शून्य प्रतिशत छ।
फिल्म क्षेत्र चलायमान बनाउन र पहिलेकै स्थितिमा फर्काउन सरकारले फेरि पनि पुरानै नीति अबलम्वन गर्नुपर्ने फिल्मकर्मीहरुको माग छ।
वितरक समाजका महासचिव शर्माले भने, ‘फिल्म पनि छ, हल पनि छ। सरकारलाई फिल्म चलाउन पहिले जस्तो समस्या छैन। त्यसैले हलमा फिल्म नचले पनि निर्मातालाई ढुक्क हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्‍यो।’
जति पुरानो हुँदै गयो फिल्म त्यति कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले सरकारले बनेका फिल्मलाई ५० प्रतिशत अनुदान, प्रदर्शकको बाल्दै नबालेको बत्तिको शुल्क र घाटाको ५० प्रतिशत अनुदान दिए फिल्म क्षेत्रलाई निकै राहत हुने उनको भनाइ छ।
साथै सरकारले कमसेकम १० वर्षसम्म फिल्मका सम्पूर्ण कर छुट गरोस् भन्ने पनि उनीहरु चाहन्छन्।
निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी भने सरकारले फिल्मका लागि प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था गरोस् भन्ने पनि चाहन्छन्। उनले भने, ‘सिनेमा करोडको बन्छ, यसैलाई धितो मानेर ऋण दिनुपर्‍यो।
अन्य क्षेत्रलाई दिए पनि फिल्मलाई भने प्रोटेक्ट लोन नदिएको उनको गुनासो छ। अधिकारी भन्छन्, ‘फिल्मको लगानी २ करोड छ भने ५० प्रतिशत नै प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था गरे पनि एक करोड आफूले हालेर फिल्म बनाउन निर्माता कस्सिन्छन्। यसले फिल्म क्षेत्र चलायमान हुन्छ।’
कलाकारले साथ नदिएको गुनासो
अन्य समयमा एकअर्काको खुट्टा तानातान गर्ने चलचित्रका संघसंस्थाहरु यतिबेला भने एकजुट भएर कलाकारतिर खनिएका छन्। कलाकारले हल सुरक्षित छ भनेर सामाजिक सञ्जालतिर हल्ला गरिदिए पनि दर्शक हलसम्म आउलान् भन्ने आश उनीहरुको छ।
हलवालाहरुले फिल्म चलाउनका लागि केही सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ। कोभिडअघि पहिलो हप्ता पचास–पचास, दोस्रो हप्ता निर्माताको सेयर कम, प्रदर्शकको बढी हुँदै जाने नियम थियो। तर अहिले भने पहिलो हप्तामा निर्मातालाई पचपन्न र बाँकी जति हप्ता चले पनि पचास–पचास प्रतिशत सेयर वितरण गरिने भएको छ। साथै नेपाली फिल्म चलेपछि दुई हप्तासम्म कुनै पनि अर्को नेपाली फिल्म नजुधाउने, सिनेमा हलमा टेलर बजाउँदा निःशुल्क, जति पनि हलले प्रचार गर्छ सबै निःशुल्क गरिदिने लगायतका सहुलियत हलवालाले निर्मातालाई दिएका छन्।